bupu ire ere akwukwo nri ohuru na ginger na galiki maka ire ere
Uru: dị ọcha, enweghị ahụhụ na-egbu ahụhụ, enweghị ọgwụ pesticide, agba edo edo, ahụ buru ibu, ogo dị elu kachasị elu, ezigbo ụtọ, ezigbo nri na-edozi ahụ, elu dị mma, edo edo n'ime na edo edo n'èzí, dabara maka mbupụ n'ụwa niile ọ na-atọ ụtọ nwere mmetụta iji belata nje bacteria, mee ka ahụ dị mma ahụike ndụ dị ogologo na gburugburu ebe obibi kwesịrị ekwesị, Ọ nwere ike ịchekwa ihe dị ka afọ atọ anyị nwere osisi nhazi nke anyị iji mepụta ginger ọhụrụ, ịsa, polishing, nchekwa, mkpọ ...
1.Apple bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, nke a na-eri eri nke osisi Malus domestica. Ọ bụ mkpụrụ osisi gbara gburugburu nke nwere ike ịbata nha na agba dị iche iche dị ka odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbara ọbara. Apụl na-adịkarị ụtọ ma na-eri cam dị ọhụrụ ma ọ bụ jiri ya na nri, ihendori, gbasaa, ihe ọ orụ juụ ma ọ bụ achịcha apụl ama ama. Mkpụrụ nke apụl nwekwara ike gwerie iji wepụta mmanụ, nke a na-eji na ụlọ ọrụ ịchọ mma. Mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ carbohydrates, sugars na fiber na-eleghara anya nke protein na abụba. Nkọwapụta ngwaahịa ...
Ihe oriri na-edozi ahụ nke apụl 1, apụl bụ ụdị obere kalori nri, gram 100 ọ bụla na-emepụta 60 kcal ọtụtụ okpomọkụ.Apple nri dị na soluble, dị mfe nke ahụ mmadụ, nke a maara dị ka "mmiri na-enye ndụ" .It na-enyere aka igbari sọlfọ na-eme ka anụ ahụ dị nro ma dịkwa nro. 2, apụl nwere “amamịghe mkpụrụ”, “mkpụrụ osisi nchekwa” aha laudatory.Eri ogologo apụl ka ọ dịla anya ọ ga - eme ka ncheta na ọgụgụ isi ka mma. Apụl bara ọgaranya na shuga, vitamin, mineral na ...
Nri oriri na-edozi ahụ: ginger ọhụrụ nwere nsị nsị nsị, ginger n'ime ahụ, nke a nwere ike ịmepụta enzyme antioxidant, ọ nwere ikike siri ike ịnagide ihe ndị na-eme oxygen, kamakwa ọ dị irè karịa vitamin E. Ginger nwere ike ịkpalite mucosa ahụ. , na-akpata vasomotor center na ọmịiko akwara reflex agụụ mmekọahụ, na-akwalite mgbasa ọbara, mbo mbuli ọrụ afo, na afo mgbu, sweating, antipyretic mmetụta. Jiang na-emekwa ka secretion nke gastric juic dịkwuo mma ...
elu mma kacha mma kacha mma Shandong ohuru na-eto eto odo odo ginger
Njirimara ： Elu dị ọcha, enweghị ahụhụ na-enweghị ahụhụ, enweghị ntụpọ, ọpụpụ, enweghị ire ure, enweghị ntụ, enweghị ahụ dị pesticide, ahụ zuru oke, na-enwu gbaa na ọkụ, anụ edo edo, obere eriri, ekpomeekpo ọkụ ọkụ, ụtọ uto maka isi nri, ọgaranya nri maka ahụike mmadụ. Ndụ ogologo ndụ, nwere ike ịbụ ihe karịrị afọ 2 mgbe echekwara ya nke ọma. Adabara okpomọkụ: 12-13 ogo. Atụmatụ ： 1. A na-etolite ginger ọhụrụ na ugbo, ndị ọrụ ugbo jiri nlezianya zụlite, ihe na-adịghị emetọ ikuku, na-akpachapụ anya ...
Mpi price Chinese N'ogbe ọhụrụ uhie yabasị maka ọrịre
1, Eyịm nwere mmetụta nke ịgbasa oyi ikuku, n'ihi na bulbs na epupụta nke eyịm nwere ụdị mmanụ na-agbanwe agbanwe a na-akpọ propylene sulfide, nwere ekpomeekpo na-ekpo ọkụ, ihe a nwere ike iguzogide oyi, guzogide nje influenza, nwere mmetụta siri ike nke nje. Eyịm bara ụba na nri na-edozi isi. Ọ nwere ike kpalite secretion nke afọ, eriri afọ na afọ nri, mụbaa agụụ ma kwalite mgbaze. Akande oro, yabasị enweghị abụba. Mmanụ ya dị mkpa nwere ngwakọta ...
Onu ahia ahia ahia ahia ohuru nke China ohuru ohuru
Eyịm anyị dị mma nke ukwuu nke nwere ọgwụ phytochemical nke nwere ike meghachi omume na ahụ mmadụ iji kpalite ma jigide ezi ahụ ike. Anyị na-ebupụ yabasị n'ọtụtụ nha na akara ule. Anyị na-azụta yabasị site n'aka ndị ọrụ ubi a ma ama nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ojiji nke pesticides na kemịkal. Eyịm anyị dị ọhụrụ ma na-edozi ahụ nke ọma na akpa jute iji hụ na ndụ dị ogologo. Ekere oke eyịm anyị nke ọma jiri akara, nha, ekpomeekpo na ...